June 30, 2011 – democracy for burma
DPNS+Statement+strongly denounces warning letter to NLD by Home Affairs-eng
On June 30, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Hugawng Natives Pray for KIA (Kachin)-video
On June 30, 2011 June 30, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
WORLDWIDE BOYCOT FINAL-video Kachin TV
On June 30, 2011 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
KIO ကိုထောက်ခံကြောင်းအိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ကချင်များကြေညာ ချက်ထုတ်ပြန်
Wednesday, 29 June 2011 22:54 KNG
အ်ိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သည့်ရှပေါင်ယောင် ဂျိန်းဖော့(ကချင်) လူမျိုးများကမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ရှိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIO/KIA)၏ နိုင်ငံရေးရပ်တည် ချက်အား ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“ဂျိန်းဖော့ဝန်ပေါင်(ကချင်)များကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ကချင်ပြည်မ (ကချင်ပြည်နယ်)၏ နိုင်ငံရေးရပိုင်ခွင့် ရရှိရေးဟာ ကျနော်တို့ ဂျိန်းဖော့ဝန်ပေါင်(ကချင်)အားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်သကဲ့သို့ အမျိုးသားရေးအတွက် ရှေ့တန်းမှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေသည့် KIO/KIAကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေကြသည့် ဂျိန်းဖော့ဝန်ပေါင် သွေးချင်းသားချင်းအားလုံး ယုံကြည်ထောက်ခံပါတယ်” ဟု အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အယူနာရှာပရာဒေ့ရ်ှပြည်နယ်တွင်ရှိသည့် ဂျိန်းဖော့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (SINGPHO DEVELOPMENT SOCIETY)က ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာ၊ အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကချင်အမျိုးသားများသည် မိမိကိုယ်ကို ဂျိန်းဖော့ဝန်ပေါင်/ ရှပေါင်ယောင်ဂျိန်းဖော့ ဟု သမုတ်ကြသော်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Singpho၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Kachin၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် Jinghposu ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။
ကချင်လူမျိုးသည် ချွေးမဘက်အမျိုး(Mayu)၊ သားမက်ဘက်အမျိုး(Dama)နှင့် ညီအစ်ကိုဘက်အမျိုး (Hpunau)ဟု ဖိုခနောက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဓိက မျိုးနွယ်စု ၆ မျိုးနှင့် ဘာသာစကား ၆ မျိုး ပြောဆိုကြသည်။
KIO/KIA အား ဇွန် ၉ ရက်မှစတင်ကာ မြန်မာအစိုးရသစ်က ထိုးစစ်ဆင်လာပြီး ယနေ့တိုင် နှစ်ဖက်ကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသကဲ့သို့ ဒေသတွင်း အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူ ပြည်သူများ ၂၀၀၀၀ ကျော်ပြီဖြစ်သည်။
Last Updated ( Thursday, 30 June 2011 13:34 )
ကမမောင်းရှိ အစိုးရစစ်တပ်အား နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်
ဇွန်လ ၃၀။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ် ကမမောင်းကျေးရွာရှိ အစိုးရစစ်တပ်စခန်းတခုအား ဗိုလ်မှူးစောဘိဦးသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ် (ဘီ ဂျီအက်ဖ်)တပ်ဖွဲ့များက ယမန်နေ့ည ၁၂နာရီအချိန်တွင် ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် မိနစ် ၃၀ကြာ နှစ်ဖက် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုတွင် လူနေအိမ်တစ်လုံး မီးလောင်ကျွမ်းသွား သလို တံတားတစင်း ပျက်စီးသွားသည်ဟု ကမမောင်းရွာသူတဦးက ယခုလို ပြောသည်။
ထိုပစ်ခတ်မှုအပြီး မနက်မိုးလင်းအချိန်တွင် အစိုးရစစ်တပ်မှ ရွာတွင်းရှိ အမျိုးသားများကို ပေါ်တာလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကြောင့် ရွာတွင်း ရှိ အမျိုးသားများသည် လွတ်မြောက်ရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြသလို အမျိုးသမီးများသည်လည်း ကြောက်လန့်ကြသည့်အ တွက် အိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်မထွက်ရဲကြကြောင်း အဆိုပါရွာသူက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဗိုလ်မှူးစောဘိက နယ်စပ်ဒေသရှိ ၎င်း၏လက်အောက်ခံ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု အသင့်အနေ အထားတွင် လုပ်ဆောင်ထားရန် ညွှန်ကြားလိုက်သည်ဟု နယ်စပ်ဒေသမှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သတင်းရပ်ကွက်အရ သိရသည်။
ဗိုလ်မှူးစောဘိ ဦးဆောင်သည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF) တပ်ရင်း(၁၀၁၁)၊ (၁၀၁၂)၊ (၁၀၁၃)နှင့် (၁၀၁၄)များမှ အင်အား ၁,၀၀၀ ကျော်သည် မေလအတွင်း မြိုင်ကြီးငူဒေသကို ၀င်ရောက်စီးနင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက် မေလ ၂၄ရက်နေ့မှစ၍ ဒီကေဘီအေတံဆိပ် ကို ပြန်လည် တပ်ဆင်လိုက်သလို ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်မဟာ(၇)တို့နှင့် ပြန်လည် လက်တွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကေအဲန်အယ်လ် အေ တပ်မဟာ(၇)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဂျော်နီက ကေအိုင်စီကို ပြောခဲ့သည်။
Photo caption (နအဖ အရာရှိများက ဗိုလ်မှူးမုတ်သုန်အား နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းလဲနေစဉ်)
နောက်ဆုံးရရှိသည့် သတင်းအရ ယနေ့မနက် ၉နာရီအချိန်တွင် ရတခတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းနေလင်းက အရှေ့တောင်တိုင်းစစ် ဌာနချုပ် ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ရှေ့တန်း၊ နောက်တန်းမှ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များအားလုံးကို တပ်လှန့်ထားပြီး လက်နက်ကြီး ၂လက်ပါ တပ်စိတ်အင်အား ၂၀ကျော် ထုတ်ယူကာ နောက်တန်းကျန် စစ်သည်အင်အားများကိုလည်း တပ်ရင်းမှူးများကိုယ်တိုင် ပေးပို့တင်ပြ ရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သတင်းရပ်ကွက်အရ သိရသည်။
The headquarters of the National League for Democracy in Rangoon. Photo: Mizzima
NLD Letter to regarding press
Ross Dunkley sentenced to one month in prison
Mizzima – The cofounder of the Myanmar Times, Ross Dunkley, was sentenced to one month imprisonment and fined 100,000 kyat (about US$ 142) on Thursday for violating the Burmese Immigration act.
The Australian journalist will not have to serve the sentence, however, because he was detained for 44 days in Insein Prison following his arrest.
recent bomb blast in the middle of Thanphyuzayart, and the fire set to passenger buses on the main motor road connecting Moulmein and Ye
Independent Mon News Agency – Amid the authorities’ demand to members of armed groups to lay down their arms by 30 June, the recent bomb blast in the middle of Thanphyuzayart, and the fire set to passenger buses on the main motor road connecting Moulmein and Ye, local residents and travelers are experiencing anxiety about the unstable situation in Mon State.
Thanphyuzayart Twon ( Photo: IMNA )
“We live in Aung Thar Yar section, and the explosion of the bomb blast was so loud. The ground was shaking. I think the war will be in the city; it no longer be only in the jungle,” saidalocal woman from Thanphyuzayart. Aung Thar Yar is about 350 meters from the location of the recent explosion.
The bomb exploded near the house of the township administrative chief, but residents throughout the entire town were in shock with the loud explosion at midnight of 28 June.
Again, around mid-day on 29 June, two buses belonging to Shwe-lee and Yazar Min transport companies were set afire by unknown armed groups after the companies failed to pay unofficial taxes to the groups. The buses were completely destroyed, and ten of the peoples were kidnapped.
A company staff member from Yazar-Min said, “We were wrong. We never thought they [the unknown armed group] would setafire. We thought they had no ability. But we were totally wrong.”
A member of the transport company’s staff explained that representatives of the armed group asked the companies to pay 1 million Kyat (approximately $1,333 US) asasecurity fee or tax to the armed group. But the companies ignored the demand, and expected the Burmese Army in the area to protect them. Continue reading “recent bomb blast in the middle of Thanphyuzayart, and the fire set to passenger buses on the main motor road connecting Moulmein and Ye” →
New Dawn Journal (No-3)